Ukunciphisa ukulahleka kokulahleka: Luhlobo luni lokulahleka kwesisindo oluphambene nawe?
/Blog/Lorcaserin , Orlistat , Sibutramine/Ukunciphisa ukulahleka kokulahleka: Luhlobo luni lokulahleka kwesisindo oluphambene nawe?
ezaposwa ngomhla 01 / 06 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Lorcaserin, Orlistat, Sibutramine.
I-1.Ukulahleka kwesiphene 2.Sibutramine HCL powder
I-3.Iyiphi indlela esebenzayo ngayo i-sibutramine i-HCL powder ekuphatheni ukukhuluphala? 4.Sibutramine i-HCL powder Isilinganisi
5.Orlistat powder 6.Usebenza njani i-Orlistat Powder Work?
7.Common Isisombululo se-Orlistat Powder 8.Lorcaserin powder
9.Kusebenza njani iLogcaserin powder / iBelviq? I-10.Inqanaba lomdala lomntu wezilwanyana zeLogcaserin powder
11.Ukuphi ukuthenga i-powder weight loss (sibutramine i-hcl powder, i-orlistat powder, i-Lorcaserin powder) kwi-intanethi?
Ukunyuka kwesisindo, kwimeko yonyango, impilo, okanye ukuqina emzimbeni, kubhekisela ekunciphiseni ubukhulu bomzimba, ngenxa yokulahlekelwa kwintsholongwane yamanzi, i-fat fat okanye i-adipose tissue okanye ubunzima obuqhenqileyo, oko kukuthi i-bone mineral deposits, muscle, tendon , kunye nezinye izicubu.
Ukulahlekelwa kwesisindo kunokuthi kungabikho ngenjongo ngenxa yokungondleki okanye isifo esisisigxina okanye ukuvela kwimigudu yokuzama ukuphucula umgangatho ophezulu okanye obonakalayo ogqithiseleyo okanye ogqithiseleyo. Ukulahleka okungaqondakaliyo okungazange kubangelwe ukunciphisa i-calorific intake okanye ukuqhuba umzimba kuthiwa yi-cachexia kwaye ingaba ngumqondiso wesifo esibi kakhulu. Ukulahleka kwesisindo ngokuqhelekileyo kubhekwa ngokubhekiselele.
Uninzi lwe-dieters lunokukhetha ezinye izidakamizwa zokutya ukuze zilawule ubunzima bawo, zize zifune ukulahlekelwa isisindo, abantu abaninzi baya kuthatha ukuhla ukusinda powder ukunciphisa ubunzima, ukwenzela ukufezekisa injongo yokulahleka kwabo, njenge sibutramine hcl, orlistat, Lorcaserin ...
Enyanisweni, ezi zithintelo-ukulahleka kwe-steroids, ezinokukwazi ukulawula ubunzima, zingakhokelela ekuboniseni kakuhle ngexesha elincinane.Kukhangeleka ukulahlekelwa kwesisindo somzimba ngamnye.
2.Sibutramine HCL powder
I-Sibutramine HCL isuswe kwi-market ye-UK 2010 ngezizathu zokuphepha. Sibutramine HCL waziwa kakhulu ukwandisa uxinzelelo lwegazi kunye / okanye imifino izinga kwezinye izigulane kwaye ingenza umngcipheko omkhulu kwizigulane kunye imbali isifo senhliziyo kwimithambo, ukusilela intliziyo congestive, arrhythmias, okanye icala. Le mveliso inokusebenzisana, kwiindlela ezisongela ubomi, kunye neminye imithi isigulane esinokuyithatha.
Nangona i-sibutramine i-HCL ineempembelelo ezibi kakhulu, kusekho izinto ezininzi ezilahlekileyo zokuveliswa kwemveliso, izinto ezibaluleke kakhulu zokusetyenziswa, ezifana nokulahleka kwesisindo, isiselo sokutya, i-jelly, njl., Ukulahlekelwa isisindo kuyahlukana ukusebenzisa i-sibutramine HCL.Ukwongezelela i-futramine ye-HCL ngokufanelekileyo kule mveliso kunokunceda ukuphucula ukukhawuleza kweyeza kunye nokunceda abathengi ukuba bafeze umnqweno wokunciphisa umzimba.
I-3.Iyiphi indlela esebenzayo ngayo i-sibutramine i-HCL powder ekuphatheni ukukhuluphala?
(Meridia powder) I-Sibutramine i-HCL powder inempembelelo ngqo kwiingqondo njengento yokuqala yokuqala emva kokuthatha iMeridia powder. Njengoko inkqubo ye-nervous isebenza njengeziko lokulawula yonke imisebenzi yomzimba emzimbeni, kubalulekile ukuba ipilisi iqhube isenzo sayo kwingqondo. I-Meridiya idibanisa neekhemikhali kwinkqubo yesifo esinefuthe ngqo kwiqondo lomzimba.
Iphilisi iphakanyiswe ngugqirha ukuba ithathwe njengomxube kunye nokutya kwansuku zonke ukuze ubone iziphumo zangoku kwisithuba esithile. Ubutyebi bufunyaniswa ukukhokelela kwezinye iingxaki ezinjenge-spike kwixinzelelo lwegazi, kunye neminye imiba yempilo enjengesifo sikashukela. Ukutya kokutya kufuneka kube ngekhalori ephantsi kunye ne-regimen efanele.
(Meridia powder) I-Sibutramine i-HCL powder ifumaneke ukuba isebenze kakhulu unyango lokunyanya njengoko unyango luyakwazi ukwehlisa i-flab eyongezelelweyo emzimbeni ngendlela ehamba ngokuthe gqolo kwithuba elithile. Ukuba inkqubo yokulahlekelwa kwesisindo ihamba kunye nokutya okufanelekileyo kunye neyeza elifanelekileyo njengoMeridia powder likhokelela ekunciphiseni ngokunyaniseka komzimba kwaye kuvula ingcaciso ecacileyo yobomi obuphilileyo.
Ukunyanyisa ingxaki yinto echazwe ngokuqhelekileyo kubantu abaninzi kwaye kuyaqondwa zizigulane ukuba kunzima kangakanani ukunyusa ubunzima obunzima. Xa umzimba unobunzima obunzima uba ngumngeni oqhubekayo ukuba umntu enze imisebenzi elula. Ngokugqithisa njengento eyintloko yokugula, ezinye iimeko nazo zihamba emzimbeni kwaye zenza umntu ochaphazelekayo ahlupheke ngokupheleleyo.
4.Sibutramine i-HCL powder Isilinganisi
Ukusetyenzwa koMntu oMdala wobuNtu
I-Sibutramine yayihoxiswa ngokuzithandela kwimarike yase-US ngomenzi we-Oktobha, i-2010 ngenxa yecandelo lovavanyo lweklinikhi ebonisa ingozi eyingozi yokuhlaselwa yintliziyo kunye nokushaya. Ulwazi olulandelayo lwenqanaba lusebenzayo xa izidakamizwa zafumaneka kwi-US.
I-Initial Dose: 10 mg ngomlomo omnye ngosuku.
Uhlobo lweGeriatric Rose for Obesity
Ucwaningo lwekliniki lwe-sibutramine aluzange lubandakanye inani elaneleyo lezigulane ngaphezu kweminyaka eyi-65. I-Sibutramine iyaphikisana kweli qela lezigulane.
Ukuxhomekeka kwezilwanyana kwi-Pediatric Dose yokunyanyisa
Ngokusekelwe kwisifundo esinye (n = 60)
14 kwiminyaka eyi-17:
Orlistat, uyazi nokuba xenical ngenxa yegama lesibheno, isilwanyana esilungiselelwe ukunyanyisa ukukhuluphala. Umsebenzi wayo oyintloko ukhusela ukuxutywa kwamafutha ekudleni komntu, ngaloo ndlela unciphisa i-caloric intake, Emva koko uncedise ukufikelela ekulahlekeni kwe-fat. Ukulahleka komsebenzi wokulahleka kusebenza ngokukhubaza i-pancreatic lipase, i-enzyme eyenza i-triglycerides emathunjini, indlela yokusebenza hlukile kwi sibutramine kunye neClenbuterol.
6.Usebenza njani i-Orlistat Powder Work?
I-Orlistat powder eyenziwa kwindawo yangaphakathi emathunjini (intlungu). I-Orlistat isebenza ngokuthintela i-enzyme (lipases) ekuqhekezeni amanqatha emanzini kwaye ivumele ukuba idlule emzimbeni ongagqithwanga. Oku kunciphisa inani leekhalori ezixutywe ngumzimba. Kwi-dose ephakanyisiweyo ye-120 mg kathathu ngosuku, i-Orlistat iyanciphisa ukunyuswa kwamafutha ngamaphesenti e-30. Nangona i-Orlistat yindlela ephumelelayo yokulahlekelwa yonyango, akusiyo isimangaliso sokulahlekelwa kwesisindo somzimba. ...I-Orlistat isebenza ngokufanelekileyo ekukhuseleni ukuxutywa kwe-fat from your diet oya kukuncedisa ukunciphisa i-calorie yokudla. Kucetyiswa ukunciphisa iikhalori zokutya malunga ne-500 calories ngosuku.
7.Common Isisombululo se-Orlistat Powder
I-Orlistat yayisetyenziswe ngomlomo njenge-capsule kunye ne-capsule engabonakaliyo. Isilinganiselo esinconywayo se-Orlistat ngu-120-mg (i-capsule) ngesinye isikhathi, kathathu ngosuku. Thatha i-orlistat ngexesha lokutya okanye ukuya kwi-1 iyure emva kokutya. Ukuba ukutya kungaphumeleli okanye ungenawo amanqatha, ungasenqa idosi yakho. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho yesigcawu okanye ilebhu yepakethi ngokucophelela, kwaye ucele ugqirha okanye umkhemisi wakho ukuba achaze nayiphi na into ongaziqondiyo. Thatha i-orlistat ngokukodwa njengoko iyalathwayo. Musa ukuthatha ngaphezulu okanye ngaphantsi okanye uthathe ixesha elide kunokuba umiselwe ugqirha wakho okanye uchazwe kwiphakheji.
Kutheni le ngcaciso imiselwe? I-Lorcaserin, njenge-Orlistat, ifumane imvume yo-FDA kwi-1999, isetyenziselwe ukunceda abantu abadala abagqithiseleyo okanye abangaphezu komzimba kunye nokuba neengxaki zonyango ezinxulumene nesisindo sokunciphisa umzimba kwaye bahlale bengagcini. I-Lorcaserin kwinqanaba lemithi ebizwa ngokuthi i-serotonin receptor agonists.I-cascaserin kufuneka isetyenziswe kunye ukutya okunciphisa ikhalori kunye nesicwangciso sokusebenzisa.
9.Kusebenza njani iLogcaserin powder / i-Belviq powder?
Ngokutsho kwilingo lelingo lonyango elithunyelwe yi-Arena ukuya kwi-FDA, phantse kwisiqingatha se-dieters ngaphandle kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela esasebenzisa le myeza elahlekelwa ubuncinane i-5% yesisindo sokuqala-okanye umyinge we-12 lbs. - ngaphezu konyaka, xa kuthelekiswa ne-23% yabathatha indawo ye-placebo. Iziphumo ezilungileyo, i-dieters iyacetyiswa ukuba isebenzise amayeza kunye nokutya okunempilo kunye neprogram yokuzilolonga. I-label ye-Belviq evumelekileyo ikhuthaza ukuba abantu bayeke ukusetyenziswa kweziyobisi xa behluleka ukulahlekelwa yi-5% yesisindo somzimba emva kweeveki ze-12; unyango olusakhulayo alukwazi ukukhokelela ekulahlekeni komzimba.
I-10.Inqanaba lomdala lomntu wezilwanyana zeLogcaserin powder
I-dose ephakanyisiweyo ye-lorcaserin powder yokulawula ubunzima ngu-10 mg kabini ngosuku.
Thatha la mayeza ngomlomo ngeglasi yamanzi. Landela izikhokelo kwileyibhile yonyango. Ungayithatha kunye okanye ngaphandle kokutya. Thatha amayeza akho rhoqo. Landela izikhokelo kwiileyibrari yakho ngokuchanekileyo.Angayithathi ixesha elide kunokuba ulandiswe. Ungayeki ukuthatha ngaphandle kweengcebiso zogqirha.
Sebenzise: Edibeneyo nokutya okunciphise-khalori kunye nokunyuka komsebenzi wokunyusa ukulawula ubunzima kwizigulane ezinomlinganiselo wokuqala we-30 kg / m2 okanye ngaphezulu (obomkhulu) OKANYE 27 kg / m2 okanye ngaphezulu (ngaphezu kokukhululeka) ubukho bokuba ubuncinane obunzima obunxulumene nesisindo esinjenge-hypertension, uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela, okanye i-dyslipidemia.
11.Nokuba uthenge ukulahleka kwesisindo (sibutramine hcl powder, i-orlistat powder, i-Lorcaserin powder) kwi-intanethi?
Ukutyelela i-pharmacy yethu kwi-intanethi uze ugcwalise umyalelo wokulahlekelwa kwesisindo sompu. Chaza indawo yokuhambisa, ubuninzi bemveliso kunye nendlela yokuhlawula. Ngethuba lemizuzu ye-30, uya kufumana isiqinisekiso sakho somyalelo. Iya kukhutshwa kwiintsuku ze-10 zeentsuku.
tags: Lorcaserin powder, I-Orlistat powder
Iimpembelelo zeLorcaserin: Ingaba i-Lorcaserin powder iyasebenza ngokwenene ukulahlekelwa yintlungu?
Umthombo wemvelo we-Orlistat powder ukulahleka kwesisindo-I-fat loss loss drug ifanele uyazi !!!
Ngaba iphephile ukusebenzisa i-sildenafil citrate (viagra)?
(MK-677 Powder) Iingcebiso zokusebenzisa i-Ibutamoren Powder	I-Stanozolol powder yokwakha umzimba: i-16 inyaniso kufuneka uyazi !!!